The Walking Dead ရုပ်ရှင်: Philadelphia တွင်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းသည်လမ်းလွဲနေသလား။ - လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ
The Walking Dead ရုပ်ရှင်: ပထမ ဦး ဆုံးလှောင်ပြောင်သရော်သူသည် Philadelphia ရှိ skyline နှင့်ပရိတ်သတ်များကိုလမ်းလွဲစေသည်
Lori Grimes (Sarah Wayne Callies) နှင့် Rick Grimes (အင်ဒရူးလင်ကွန်း) - The Walking Dead - ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၁၁ - ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်: Gene Page / AMC
Sabrina အပိုင်း ၃ ၏ Chilling Adventures အပိုင်း (၃) သည်ရိုက်ကူးပြီးစီးသည်။ လွှတ်ပေးသည့်နေ့ရက်ကိုမသိရသေးပါ ဘယ်တော့ Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ 16 Netflix ကလာမလဲ
AMC ရဲ့ Untitled များအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးနောက်တွဲယာဉ်: အဆိုပါ Walking Dead ရုပ်ရှင်မြို့တော်ရဲ့ skyline featuring နေဖြင့် Philadelphia တွင် set ကိုပုံပြင်တစ်ပုဒ်မှာအရိပ်အမြွက်, ဒါပေမယ့်ပုံရိပ်ကျနော်တို့ထင်ထက်ပိုပြီးအထင်မြင်မှားစေသောပါပြီလိမ့်မယ်။
ပယ်သွားကြဖို့သတင်းအချက်အလက်အများကြီးမရှိရင်အဲဒါကိုပရိတ်သတ်တွေ AMC ရဲ့များအတွက်တိုယိုတာနောက်တွဲယာဉ်များကရှုပ်ထွေးခဲ့ကြပုံကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည် လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ ရုပ်ရှင်။ Scott Gimple နှင့် Robert Kirkman တို့သည်ခေါင်းကိုလျှော်စွာလျှို့ဝှက်စွာလျှို့ဝှက်ထားပြီးရုပ်ရှင်ကိုလျှို့ဝှက်နက်နဲစွာဖုံးကွယ်ထားသည်။ သတင်းကောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်၏အဓိကအပိုင်းကိုဆုံးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည် ခေါင်းစဉ်မရှိ: သေပြီလမ်းလျှောက် ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရုပ်ရှင်အားလုံး။
ရွှေလင်းတမျက်လုံးပရိတ်သတ်များသတိပြုမိသကဲ့သို့ - အဘယ်သူမျှမ Pun ရည်ရွယ်ထား - ကစာသားထဲမှာအသုံးပြုနောက်ခံအဆောက်အ ဦး များ၏ Philadelphia တွင်ရဲ့ skyline ကိုသရုပ်ဖော်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာမှောင်မိုက်နေတဲ့အတွက်အနီးအနားမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမပြောနိုင်ပေမယ့်ပရိသတ်အများစုကိုသတိမထားမိတဲ့သဲလွန်စတစ်ခုရှိတယ်။
ကလစ်သည်ထိုတိုတောင်းသော 0:24 စက္ကန့်အတွင်းပြသောအရာကို အခြေခံ၍ ဘောင်သို့ပျံသန်းသည့်ရဟတ်ယာဉ်သည် Philly ၏မြို့အကန့်အသတ်အတွင်းသို့သွားနေသည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါရဟတ်ယာဉ်သည်အနီးအနားရှိရဟတ်ယာဉ်တန်းမှပျံသန်းသည်။ ကလစ်တိုလေးတွင်တွေ့ရန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်မျက်နှာပြင်၏အောက်ဆုံးအပိုင်းကိုဆန်းစစ်ပြီးနောက်ရောက်လာသော pad ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အနီရောင်အလင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဆက်သွယ်မှုကိုအတည်ပြုသောရဟတ်ယာဉ်၏ရဟတ်ပေါ်တွင်တူညီသောအနီရောင်အလင်းသည်မျက်တောင်ခတ်နေသောကြောင့်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။
ဤအသေးစိတ်အချက်သည်အရေးမပါပုံရသော်လည်းအနည်းငယ်သောသီအိုရီအသစ်ကိုကိုင်တွယ်ရန်အခြေခံကိုဖန်တီးသည်။ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ လမ်းလျှောက်နေသောသေလွန်သူများ ရုပ်ရှင်အစားမြို့တော်ကိုယ်နှိုက်အတွင်းမြို့တော်ရဲ့ဆင်ခြေဖုံးတွင်နေရာတစ်နေရာကြာပါသည်။
မြို့တော်ရဲ့မြို့သူမြို့သားများမုတ်ဆိတ်မွေးကြောင့် CRM အဖြစ်လူသိများအုပ်စု Philadelphia တွင်အပြင်ဘက်တွင်တပ်စွဲကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းရှိပါတယ်။ သူတို့သည်မြို့ထဲသို့လောင်စာဆီများဖြုန်းတီးရန်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့မရှင်းပြသော်လည်း၊ သူတို့သည်ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိချေ။ အကယ်၍ အုပ်စုသည်ကမ္ဘာကြီးကိုပြုပြင်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့လျှင်သူတို့၏ဂိမ်းများကိုအတွင်းမှဂိမ်းတစ်ခုမှထုတ်ယူရန်အန္တာရာယ်ရှိနိုင်သည်။
စဉ်းစားရန်လာကြပါ၊ Rick Grimes (Andrew Lincoln) ကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသူတို့ရရှိခြင်းသည် CRM ကိုသူတို့လုပ်ငန်းအတွက်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကိုစုဆောင်းနေသည်ဟုထင်မြင်စေသည်။ ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ရှိခဲ့လျှင်ပစ္စည်းများကိုမြို့တော်အတွင်းမှပြန်လည်ရယူရန် Rick အားတာဝန်ပေးလိမ့်မည်။ မေးခွန်းမှာ CRM အတွက်မည်မျှအရေးကြီးနိုင်မည်နည်း။ အဲဒီမှာဖုတ်ကောင်ရောဂါကူးစက်မှုမှကုသမှုရှိပါသလား
မင်းဘာထင်လဲ ခေါင်းစဉ်မရှိ: သေပြီလမ်းလျှောက် ရုပ်ရှင်သဘောင်္? ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ။
နောက်တစ်ခု:20 အကောင်းဆုံး Netflix ကဟယ်လိုဝိန်းပွဲကိုကြည့်သည်
သငျသညျရာသီ2The Good Doctor ကြယ်ပွင့် Chris D'Elia ထပ်ပြောသည်
ရှာဇမ်လား Netflix သို့လာမလား?
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးထိတ်လန့်ဖွယ်ရုပ်ရှင်ကား ၅၀: အမ်တီဗီလ်ထိတ်လန့်မှုကဆက်ပြောသည်
Flash ကိုရာသီ ၇ အတွက်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။ Barry Allen အတွက်ဘာဆက်ဖြစ်မည်နည်း။
Netflix မှအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင်များဖြစ်သော Jay နှင့် Silent Bob Strike Back တို့သည်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည်
ချစ်သူများနေ့အတွက်ကြည့်ရှုရန် Non-romantics များအတွက်5ကောင်းသော Netflix ကရုပ်ရှင်
ကျွန်ရာသီ ၂ - လွှတ်ပေးမည့်နေ့နှင့်နောက်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာများ
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ပြတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ - အမေရိကန်အဖေ။ ရာသီ ၁၀
ယခုအပတ်တွင်ကြည့်ရှုရန် Netflix တွင်ပြသထားသည့် ၅ ခု - Yes Day နှင့်အခြားအရာများ
Netflix အပေါ် Mister & Pete ၏မလွှဲမရှောင်ရှုံးနိမ့်လား?
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းနှင့် Frankie ရာသီ 6: ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲနှင့်နောက်ဖြစ်ပျက်ကို
Girls 'Night ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ကောင်းသော Netflix ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲ ၅ ခု
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဒိုင်ယာရီ Netflix ပယ်သွားသည့်အခါ
တီဗီပေါ်မှာမကောင်းတဲ့ santa အခါ
Netflix အပေါ်နေသာရာသီ 11 အမြဲအခါ
Annihilation သည်အမေရိကန်ပြင်ပရှိ Netflix သို့မတ်လတွင်ရောက်ရှိမည်
Planet Earth2သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Netflix သို့မည်သည့်အချိန်တွင်လာမည်နည်း။
San Diego ရုပ်ပြောင် (ဓာတ်ပုံ) တွင် Stranger Things မှ cosplay ပြသခဲ့သည်။
Netflix တွင် Bloodline ရာသီ2ကိုမည်သို့ကြည့်မည်နည်း
Netflix အသစ်ဖြန့်ချိမှု - ကားရခြင်း